साउथ फिल्म ‘थिरिमाली’मा स्वस्तिमा खड्का – Dainik Samchar
साउथ फिल्म ‘थिरिमाली’मा स्वस्तिमा खड्का
August 11, 2021 556
काठमाडौं । अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्काको अभिनय दक्षिण भारतीय फिल्म ‘थिरिमाली’मा पनि देख्न सकिने भएको छ ।
नेपाली फिल्म ‘ग्याङस्टार ब्लूज’का निर्माता सरोज न्यौपानेले दक्षिण भारतीय कम्पनी ‘एन्जल मारिया सिनेमा’सँग मिलेर निर्माण गरेको यो फिल्ममा स्वस्तिमाको अलवा माओत्से गुरुङ, उमेश तामाङ लगायत नेपाली कलाकारको अभिनय देख्न सकिन्छ ।
राजिब सेट्टीको निर्देशन रहेको फिल्ममा भारतीय कलाकार विविन जर्ज, जोनी एन्टिवनी, धर्मजन वोलगाट्टी, हरेश कनारान, आना रेश्मा लगायतको मुख्य भूमिका छ । हालै छायाँकन पूरा गरेको फिल्मको निर्माण युनिटले नेपाली कलाकार माओत्से गुरुङको
अभिनय रहेको सुटिङ सेटका केही तस्विरहरु सार्वजनिक गरेको छ । सार्वजनिक तस्बिरमा नेपालको पहाडी भेगका दृश्य देख्न सकिन्छ । फिल्ममा माओत्सेको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । स्वस्तिमाको भूमिका भने दर्शकका लागि सरप्राइज हुने निर्माता
युनिटले जनाएको छ । हिन्दीसहित मलयालम, कन्नड, तमिल र तेलूगू भाषामा फिल्म रिलिज हुनेछन् ।
Prevमहावीर पुनले पाए गाडी उपहार
Nextउपत्यकामा राति ८ बजेपछि सवारीसाधन चलाउन नपाइने
सेतो पानी बगिरहने समस्याले हैरान हनुहुन्छ ? यसरी गर्नुहोस् घरमै उपचार ! (17623)
उपमेयरमा जितेलगत्तै कोसँग बिहे गर्दै छिन् सुनिता डंगोलले ? (8575)
चितवनमा एमालेले लियो अग्रता, गठबन्धनलाई पछि पार्यो (7931)